आज पैसा नउठे भोलि हुदैन राधिकाको अप्रेसन : मानवताको लागि भएपनि भिडियो शेयर गर्दिनुहोला! – PathivaraOnline
Home > समाज > आज पैसा नउठे भोलि हुदैन राधिकाको अप्रेसन : मानवताको लागि भएपनि भिडियो शेयर गर्दिनुहोला!
आज पैसा नउठे भोलि हुदैन राधिकाको अप्रेसन : मानवताको लागि भएपनि भिडियो शेयर गर्दिनुहोला!
admin February 24, 2019 समाज	0
कठै ! दैव पनि कति निष्ठुरी ! खाउखाउ लाउलाउ भन्ने उमेरमा छारेरोगले सतायो राधिका राईलाई। उनलाई पनि अरु साथी सरह पढ्न मन थियो होला, साथी भाईसँग खेल्न मन थियो होला, तर उनको रोगको कारणले गर्दा उनले बाल्यकालको त्यो रहर अनि सुखद पललाई समेत मन भित्रै मार्नु पर्यो उनले । अहिले उनी २४ वर्ष कि भइन्। बाल्यकाल देखि लागेको यो रोगले उनलाई अहिले सम्म सताइरहेको छ।
छारेरोगले उनको साथ स्वासले झैँ आजको दिन सम्म पनि छोडेको छैन। बाल्यकाल देखि नै राधिका जहाँ बस्यो त्यही पत्तै नपाई एक्कासी ढल्ने गर्थिन्। ज छारे रोगले च्याप्थ्यो तब उनलाई केहि कुराको पनि होस् हुदैनथ्यो। उनी बेहोस हुने, काम्ने, मुखबाट फिज काट्ने गर्थिन्। त्यसैले उनलाई एक्लो छोड्नु भनेको जानी जानी मृत्युको मुखमा धकेली दिनु जस्तै हो। छारे रोग निको पार्न राधिका राइका बुवाआमा मच्छीन्द्र राई र रमला राईले आफुले जानेको बुझेको सबै गरे। तर परिवारको प्रयास सफल हुन सकेन।
नेविसंघका दुई गुटबीचको झडपले काँग्रेस मुख्यालय रणभूमि – भिडियो सहित
‘सारेगमप’मा आयुषले दिए धमाकेदार प्रस्तुती, अनिल र माधुरी संगै जजले गरे प्रशंसा (भिडियोसहित)
अस्पतालमा बिरामी कुरुवा युवतीले रविलाई देखेपछि रुँदै भनिन्, रबि दाइ तपाई नभए मैले आमा र दिदि पनि भन्न पाउने थिएन् (भिडियो)
‘लकडाउन’मा बिहानै जनताको सेवा गर्न डिउटीमा हिडेकि नर्सलाइ एम्बुलेन्स ठक्कर दिएपछि घटनास्थलमै निधन !
सु’हागरातको दिन र’क्सीले फि’टान, मलाई सेकेण्ड हेण्ड भन्यो, ३ महिनापछि यस्तो हालत-भिडियो हेर्नुहोस